Mutungamiri Vanotangisa Itsva Inosungirwa COVID-19 Yekuyedza Lab kuEntebbe International
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Mutungamiri Vanotangisa Itsva Inosungirwa COVID-19 Yekuyedza Lab kuEntebbe International
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Uganda Breaking News
Mutungamiri weUganda atangisa nzvimbo dzekuyedza kuEntebbe International
Mutungamiri weUganda, HE Yoweri Kaguta T. Museveni, vakaparura zviri pamutemo marabhoritari eCCIDID-19 neChishanu, Gumiguru 22, 2021 pamutambo wakaitirwa panzvimbo itsva yekuwedzera. Iyo lab inofanira kushandiswa kumanikidza COVID-19 kuyedzwa kwevese vanouya vafambi vese vakabaiwa uye vasina kuvharirwa kuburikidza neEntebbe International Airport.
Chiyero ichi chakanangana nekumisa kupinzwa munyika kwezvakasiyana zvinouraya zveconavirus munyika uye kubatsira kuwedzera kupararira kwechirwere ichi uye kudzivirira kurwisa kwechitatu wave.
Nyika iyi yange ichingoedza vafambi chete vanobva kunyika dzine njodzi huru.
Iyo nzvimbo inokwanisa kuyedza vatakuri zviuru mazana matatu nemazana matatu mumaawa gumi nemaviri uye vanosvika mazana manomwe nemazana maviri mumaawa makumi maviri nemana.
Mumashoko akaburitswa naVianney Mpungu Luggya, maneja wePublic Affairs we Uganda Civil Aviation Authority, Chiziviso kuAirmen chinozivisa ruzivo rwezvinodiwa zvekuyedzwa kumakambani ese endege chinofanirwa kugadziriswa nekuchimbidzwa zvinoenderana.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa ichi, President vakarumbidza vose vane chekuita nekuita basa iri. Mutungamiriri wehurumende, Rt. Hon. Robinah Nabbanja, vakambodoma bazi rezvehutano, bazi rezvemari, kuronga nekusimudzirwa kwehupfumi, bazi rezvemabasa nekutakurwa, Army Brigade, neUganda Civil Aviation Authority vachiti vakaita mabasa epamusoro.
Basa iri rakapindwawo neMutevedzeri weGurukota rechitatu, Rt. Hon. Lukiya Nakadama; Gurukota rinoona nezveGeneral Duties, Hon. Justine Lumumba; Gurukota rezvehutano, Dr. Jane Ruth Aceng; uye Gurukota rezvemari, kuronga nekusimudzirwa kwehupfumi, Hon. Matia Kasaija, pakati pevamwe vanoremekedzwa.
Pakutanga, Rt. Hon. VaNabbanja vakazivisa vane chekuita nedambudziko iri pamusangano wakaitwa nemusi weChina, Gumiguru 21, 2021, kuti danho iri rine chinangwa chekumisa kupinzwa munyika kwechirwere ichi. Izvo zvakare ndeyekudzosera kumwe kupararira kwechirwere uye chengetedza kubva kune yechitatu wave.
Bazi rezvehutano rakamisa marabhoritari ekuyedza panhandare yendege uye vakadzidzisa nyanzvi dzemumarabhoritari, vanopinda dhata, nevamwe vese vashandi vezviteshi zvehutano kuti vaite basa iri. Nguva yekushandurwa kweyakafanira COVID-19 bvunzo zvichadzikiswa kubva pamaawa mana kusvika kumaawa maviri nemaminitsi gumi nemashanu.
Michina mishanu yePCR yekuyedza ine simba rekuyedza mazana matatu emasampuli paawa iripo Entebbe International Airport. Nzvimbo iyi ine simba rekuyedza vafambi zviuru zvitatu nemazana matanhatu mumaawa gumi nemaviri uye vafambi zviuru mazana manomwe nemazana maviri mumaawa makumi maviri nemana.
Hurumende yakadzikisa mutengo webvunzo dzeCOVID-19 kubva paUS$65 kuenda paUS$30. Kuendeswa kwemarabhoritari ekuyedza kubva kuPeniel Beach uko marabhoritari akazvimirira aishanda kuEntebbe International Airport pasi pehurumende yaive nechinangwa chekuvandudza nzira yekufambisa vafambi kuitira kuti basa riitwe nemazvo.
Mukuru weUCAA, VaFred Bamwesigye, vatenda mutungamiri wenyika nedare remakurukota nemabasa akasiyana siyana, zvikuru rubatsiro rwemari kumasangano akasiyana siyana ari kupinda mumusangano uyu kuti vakwanise kuisa michina yekuyedza panhandare yendege, izvo zvange zvichitarisirwa kusimudzira ruzivo rwevanhu. mwenje wekuti zvese maitiro anozopedzwa kunhandare. Akadana zvakare kuti riwedzere rutsigiro kuitira kuti Chiremera chikwanise kuita zvirongwa zvinoenderera.
Uganda Civil Aviation Authority (UCAA) yanga ichishanda pamwe nevamwe vakaita seBazi rezvehutano, Uganda People's Defence Forces (UPDF) engineering brigade yakavaka nzvimbo iyi mumwedzi mumwe chete, National Planning Authority, Uganda Tourism Board, Ministry. yeTrade, Chengetedzo, uye mamwe masangano kuti ave nechokwadi chekuti matanho ekuchengetedza acherechedzwa.
Dr. Atek Kagirita, Deputy Incident Commander weCCIDID-19 uye anoona nezvekuongororwa kweCCIDID-19 panhandare yendege, vakati vakaraira vashandi kuti vavape mabasa epanhandare yendege, chengetedzo, uye chengetedzo kuti vadzivirire denda.
Vatasvi vanozopfuura nemaitiro ehutano hwechiteshi uye gare gare nzvimbo yekutsvaira.
"Tine masampuli eshabhu evashanyi, maVIP, uye evafambiwo zvavo," akadaro Kenneth Otim, Mukuru wePublic Affairs Officer, UCAA.
Kana mufambi abvarurwa, vanozotungamirwa kuburikidza nekubuda kwechiteshi kuenda uko UCAA yakaronga nzvimbo yekubatira kune vese vafambi vangadai vakatora swabs yavo.
Nguva yekushandurwa kweiyi swabbings kusvika iyo nguva yaunowana yako PCR bvunzo mhinduro inotarisirwa kuve 2 1/2 maawa. Iyo ficha ine yekuyedza michina, dhata nzvimbo, uye Genprex michina.
National Information Technology Authority (NITA-U) yakapa chinongedzo cheInternet kuti ive nechokwadi chekuti masisitimu ari munzvimbo dzinopaza uye masisitimu erabhoritari anotaurirana, kuitira kuongorora marekodhi evatakuri, uyezve kuona kuti imarii yakabhadharwa kuyedzwa .
Vapfuuri vanowanikwa vasina kunaka vanobvumidzwa kupfuurira kunzvimbo yavo yekupedzisira.
Vashanyi vakawanikwa vaine hutachiwana vanozovharirwa kune mamwe mahotera, nepo vafambi vanogara vachiwana zvakanaka, Ministry of Health ichaendesa mota kuti dzivatakure kunhandare yeNamboole (Mandela) uko kwavachaiswa kwavo vega.
Sekureva kwedhipatimendi rezvehutano, kutorwa kwepamusoro-soro kwemajabs (668,982) kwakanyorwa mumwedzi uno waGumiguru, mazuva mashoma mushure mekudzoka kuUganda majekiseni 5.5 miriyoni, zvichiratidza kuwirirana pakati penzvimbo yepamusoro yekudzivirira uye kuwedzera jabbed vanhu.
Mhedzisiro ye COVID-19 bvunzo yakaitwa muna Gumiguru 20, 2021, inosimbisa 111 mitsva mitsva. Mhosva dzakasimbiswa dzakaunganidzwa i125,537; kuwedzerwa kuwedzerwa 96,469 2; uye XNUMX kufa kutsva.